कोरोना भाइरस : वैज्ञानिकको चमत्कार, भाइरससँग लड्न अर्काे भाइरस ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/कोरोना भाइरस : वैज्ञानिकको चमत्कार, भाइरससँग लड्न अर्काे भाइरस !
कोरोना भाइरस : वैज्ञानिकको चमत्कार, भाइरससँग लड्न अर्काे भाइरस !
काठमाडौं । संसारको संकट बनेर फैलिरहेको कोरोना भाइरस अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेर खडा भएको छ ।
द्वितीय विश्वयुद्ध पछि संसार सबैभन्दा ठूलो संकटको सामना गरिरहेको यो विश्वमा अहिलेसम्म ६९ हजार ५०९ जनाले ज्यान गुमाईसकेका छन् भने १२ लाख ७६ हजार ११७ जनामा संक्रमण देखिएको छ । तर भर्खरै मात्र कोरोनाको बारेमा खुसीको एउटा खबर आएको छ ।
वैज्ञानिकहरुले कोरोना भाइरससँगै लड्न सक्ने क्षमता भएको एक नयाँ भाइरस बनाएका छन् । उनीहरुले आफूले निर्माण गरेको उक्त भाइरसले कोभिड-१९ र फ्लू जस्ता भाइरसलाई नष्ट गर्ने दाबी गरेका छन् ।
बर्लिनस्थित फोर्सचुंग्सवर्बन्ड ई.वी. आठ वैज्ञानिकहरुको एक संगठन हो । यस संगठनका वैज्ञानिकहरुको टिमले कोरोना भाइरसको यस्तो कोशिका बनाएका छन् जसले, फोक्सोको कोशिकाहरुको नक्कल गरेर कोरोना भाइरससँग लड्न सक्दछ ।
यो जानकारी होस् कि, कोरोना भाइरसले अत्याधिक असर फोक्सोमा नै गर्ने गर्दछ । जसको कारण संक्रमितहरुलाई श्वास फेर्न असहज हुने गर्दछ । साथै शरीरको लागि आवश्यक अक्सिजन मिल्न सक्दैन र त्यसकै कारणले गर्दा संक्रमितहरु ज्यान गुमाउने गर्दछन् ।
एन्टीबायोटिक औषधिहरुको विकल्प
वैज्ञानिकहरुले यस भाइरसका नाम ‘ब्याक्टेरियोफेज क्याप्सिड’ राखेका छन् । यो भाइरसकै अर्काे प्रकार हो । जसलाई एन्टीबायोटिक औषधिको विकल्पको रुपमा तयार पारिएको हो । यो भाइरस विशेष गरेर अन्य रोगका अधिकांश जीवाणुहरुलाई खाएर आफू जीवित रहन्छ ।
शोधका प्रमुख लेखक ड्यानियल लस्टरले आफूले तयार पारेको भाइरस संक्रामक नरहेको र त्यसमा १८० प्रोटिनका गुणहरु राखिएको बताएका छन् ।
जसका कारण भाइरसले रिसेप्टर्सको जसरी काम गर्ने पनि उनले बताएका छन् । त्यसैले यो भाइरस इन्फ्लूएन्जा भाइरसलाई हराउन पनि सफल भएको उनले बताएका छन् ।
दोश्रो शब्दमा भन्ने हो भने, इन्फ्लूएन्जा भाइरसलाई नष्ट गर्नको लागि यो भाइरसले ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको उपयोग गर्दछ ।
शोधको टिमले अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएको छ । वैज्ञानिकहरुको यस्तो विश्वास छ कि, उनीहरुले निर्माण गरेको भाइरस टेक्निक कोरोना भाइरसको औषधी बनाउनमा महत्वपूर्ण सावित हुनेछ ।
यदि कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने सफलतामा उक्त भाइरस सम्भावित हतियार हुन सक्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
यसरी काम गर्नेछ ब्याक्टेरियोफेजले
शोधकर्ताहरुका अनुसार फेज भाइरसले चरणवद्ध तरिकाबाट कोभिड-१९ जस्तो फ्लू भाइरसहरुलाई फोक्सोका कोशिकाहरुको नक्कल गरेर एक प्रकारले आफ्नो जालमा फसाउँदछ ।
त्यसपछि आफ्नो जालमा फसेका फ्लूको भाइरसहरुको सतहलाई हेमाग्लुटिनिन नामक प्रोटिन रिसेप्टर्सले छोपिदिन्छ । र भाइरसले कोरोना जस्ता फ्लू भाइरसलाई नष्ट बनाउँदछ ।
अत्याधिक महत्वपूर्ण छ यो भाइरस
१. निमोनियामा श्वास फेर्नमा असहज भएको अवस्थामा सहज बनाइदिन्छ ।
२. घाउहरुको किटाणुहरुलाई नष्ट गरेर चाँडै ठिक बनाउँदछ ।
३. फूड पोइजनमा शरीरलाई विषक्तताबाट बचाउँदछ ।
४. वैज्ञानिकहरुले दाबी गरेका छन् कि, कोभिड-१९ भाइरससँग लड्नका लागि यो भाइरस सक्षम रहेको छ । तर परिक्षण बाँकी नै रहेको छ ।
५.गणितीय मोडर र क्रायो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप अध्ययनबाट यो कुरा पत्ता लागेको छ कि, ब्याक्टेरियोफेज भाइरस एभियन फ्लू भाइरस सहित भाइरसका अन्य प्रकारकोविरुद्ध लड्न सक्छ ।
६.शोधका अर्का शोधकर्ता क्रिश्चियन ह्याकेनवर्गरले जनावरहरुको कोशिकाहरुमा परिक्षण गर्दा फेज क्याप्सिड मानिसहरुको फोक्सोको कोशिकाहरुमा फ्लूलाई नष्ट गर्न सक्षम भएको बताएका छन् ।
परिक्षणका क्रममा भाइरसले प्रजनन क्षमतालाई पनि रोक्न सफल भएको पाईएको छ ।
नेपाली कोरोना आयुर्वेदिक औषधिले सात दिनमै निको भए ३३ कोरोना सङ्क्रमित।
दल विभाजन खुकुलो पार्ने अध्यादेश : प्रधानमन्त्रीको एक तीर, दुई शिकार
सारा जीवन कम्युनिस्ट सत्ताको कामना गरेर बिताएको आफूलाई अहिले कम्युनिस्ट यस्तो बिब्ल्याँटो भएको देख्दा दिक्क लाग्ने कवि दुर्गालालले सुनाए।
भारतबाट एकैदिन ३४२ नेपाली नरैनापुर आए